Njikọ Ntanye Njikọ Njikọ | Martech Zone
Ozugbo ụfọdụ ndị folks ghọtara na njikọ dị na saịtị ndị dị na mpụga nwere ike ime ka ọkwa Google gị kwalite, ụlọ ọrụ SEO gbawara n'uto. Ọ bụ otu ijeri dollar ahịa ma Google ngwa ngwa kwụsịrị inye ndị ọrụ nnukwu nsonaazụ. Ọ ghọrọ asọmpi nke onye kwụrụ ụgwọ maka ọtụtụ backlinks. Obi dị m ụtọ, maka ndị ahịa kwesịrị ekwesị, ndị a Ejirila SEO cheaters. Mgbanwe mgbanwe algorithm nke Google ekpugherela njikọ jikọtara nke ọma ma ha bidola ịkatọ ụlọ ọrụ ebe ha na-achọta njikọ ndị na-ekwekọghị n'okike.
Njikọ njikọta nke ebumnuche nke ịgbanwe ma ọ bụ na-achịkwa nsonaazụ ọchụchọ bụ imebi Ntuziaka Webmaster nke Google.
Ekwenyela na onye ọ bụla kwuru na ị nwere ike ịzụta ọdịnaya na njikọ na na otuodila adighi emebi iwu. Ọ bụrụ na ebumnuche nke ọdịnaya azụtara ga-etinye njikọ ahụ, ị ​​ka mebiri Usoro nke Ọrụ Google!
Ihe omuma a, Tactical Touchdowns - The Link Nnweta Playbook, bụ nnukwu infographic nke na-akọwapụta ihe ịma aka, ntuziaka, na ohere iji wuo njikọ dị iche iche. Azịza ya, n'ezie, bụ ichefu njikọ niile ma lekwasị anya na mbọ gị na ịmepụta ọdịnaya dị egwu.
Akwa ọdịnaya na-akọrọ. Ekekọrịta na-arụ ọrụ na netwọk dị mkpa. Ikekọrịta nkwekọ bara uru na-ejikọ njikọ dị mkpa. Njikọ njikọ dị mkpa maka ọkwá.
Tags: njikọ ụlọnjikọ nnwetanjikọ-ụlọnhazi ọkwanyocha ọchụchọChọọ MarketingA
Nzọụkwụ 5 ịbawanye okporo ụzọ ma gbanwee ndị ahịa
Nọvemba 8, 2012 na 10:57 nke ụtụtụ
Iji okwu egwuregwu bọọlụ mara mma iji nweta isi okwu gị gbasara omume ụlọ njikọ dị mma na nke na-adịghị mma n'ụzọ pụrụ iche. Ọ bụghị onye na-akwado Peyton Manning (ịbụ onye si New England) mana enwere m ike ịghọta ya! Isi okwu banyere "ịgbasa bọọlụ gburugburu" masịrị m karịsịa. Iji kwalite nhụta gị n'ezie wee nweta njikọ n'ụzọ nkịtị, ịkwesịrị ịmepụta ọdịnaya na akụrụngwa weebụ na-abụghị nke gị.
Nnukwu isiokwu na njikọ njikọ. M ga-emerịrị usoro a.